होमस्टे स्थापनाले लिगलिग कोट घुम्न सहज – Highlights Tourism
होमस्टे स्थापनाले लिगलिग कोट घुम्न सहज
गोरखा । हामी मध्ये धेरैले पढेको वा सुनेको ऐतिहासिक स्थान हो, लिगलिग कोट । धेरै अघि लिगलिग कोटका घले शासकहरू दसैँको दिन दौडेर राजा छान्थे ।
त्यही दौडनेहरूको हुलमा लमजुङका युवराज द्रव्य शाह पनि मिसिए । उनी राजा बनेपछि दौडेर राजा हुने चलन पनि अन्त्य गरी दिए । पछि उनै द्रव्य शाहका सन्तानले गोरखामा शासन गरे । राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे ।
ऐतिहासिक स्थल लिगलिग कोट ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मात्र छैन, सुन्दर दृश्यावलोकनका लागि पनि उपयुक्त छ । उक्त स्थानलाई अहिले पर्यटकका लागि आकर्षक स्थलको रूपमा विकास गर्न स्थानीयहरू जुटेका छन् ।
यही मेसोमा पालुङटार नगरपालिकाको वडा नं. २ मा पर्ने खोल्लीमा लिगलिग कोट होमस्टेको स्थापना गरिएको छ । होमस्टेको उद्घाटन नगरपालिकाका प्रमुख इ. दीपकबाबु कँडेलले गरे ।
प्रमुख कँडेल लिगलिग कोट आधुनिक नेपालको जग बसाउने स्थान हुनुका साथै त्यसअघि नै लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अङ्गालेको राज्यको रूपमा रहेको बताउँछन् । ‘तत्कालीन समयमा बर्सेनि दौडेर राजा छान्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास यहाँ थियो’ उनी भन्छन्, ‘यो ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको उजागरका साथै यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको प्रचार प्रसार गर्न सक्यो भने यसले पर्यटनको विकासमार्फत यहाँका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न सघाउ पुग्ने छ ।’
काठमाडौं–पोखरा पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने डुम्रेबाट लमजुङ–मनाङ जाने बाटो लागेपछि तुरतुरेबाट पारी तरेर लिगलिग कोट जान सकिन्छ ।
पछिल्लो समय यहाँ इतिहासमा चासो राख्नेहरूको साथ साथै घुमफिर मन पराउनेहरू पनि पुग्न थालेका छन् । ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान जाने त भए नै प्राकृतिक दृश्यावलोकनको लागि पनि जान थालेका हुन् । यसरी घुम्न जानेहरूको बेहोर्ने समस्या एउटै थियो, व्यवस्थित खाना र बस्ने ठाउँको अभाव । तर अब लिगलिग कोट घुम्न जानेहरूको लागि त्यो समस्या टरेको छ । होमस्टे सञ्चालनमा आएपछि घुमफिरमा जानेहरूको खाना र बस्ने प्रबन्ध भएको छ । गाउँको छानिएका सात वटा घरमा सुविधायुक्त होमस्टे स्थापना गरिएका छन् ।
सात घरबाट सुरुवात गरिएको यो होमस्टेको थप गर्दै जाने स्थानीयले बताएका छन् । होमस्टेका हरेक घरमा एउटा सिङ्गल र एउटा डबल बेड गरी तीन जना अटाउने छुट्टै पाहुना घर बनाइएको छ । घरसँगै आधुनिक ट्वाइलेटको बनाइएको छ ।
होमस्टेमा बास बस्न आउनेहरूले घरेलु वातावरणमा स्थानीय स्वादको खानपान पाउने छन् । स्थानीय रूपमा उत्पादित मह, मौसम अनुसारको फलफूलको आनन्द लिनुका साथै मगर संस्कृतिको अवलोकन पनि गर्न सकिने छ ।
हामेस्टेका संरक्षक वेदबहादुर रानाले मगरहरूको बासोबास रहेका कारण अहिले चर्चित रहेको कालो बुङ्गुर यहाँको विशेष आकर्षण हुन सक्ने बताए । ‘हामी मगरहरूले कालो सुँगुर पाल्ने चलन छ, बङ्गुर को भन्दा धेरै मिठो मासु हुने हुँदा पाहुनाले चाहेमा हामी यसको परिकारहरू पनि टक्र्याउन सक्छौँ’ उनले भने ।
साथै यस क्षेत्रमा रैथाने माहुरी पनि राम्रो रहेको छ । पाहुनाले चाहेमा उनीहरूकै अगाडी मह काढेर खुवाउने र दिने गर्न सकिने पनि बताइएको छ । यहाँ परम्परागत काठे घार तथा आधुनिक घारहरूमा पनि माहुरी पालेका छन् ।
लिगलिग कोट होमस्टे स्थापनाका लागि अमेरिकामा बसोबास गर्ने स्थानीय डा. बालकृष्ण शर्मा मरहट्ठाको विशेष योगदान रहेको छ । उनकै संयोजनमा आर्थिक सहयोग जुटाएर होमस्टे निर्माण गरिएको हो । प्रतिहोमस्टे निर्माणका लागि तीन लाख ३० हजार रुपैयाँका दरले नगद सहयोग गरिएको छ ।
सँगसँगै अमेरिका नामक संस्थासँग समन्वय गरेर फर्निचरको लागि थप पाँच हजार डलर पनि शर्माले नै जुटाइदिएका हुन् । पालुङटार नगरपालिकाले पनि केही सहयोग गरेको छ भने स्थानीयले श्रमदान गरेर होमस्टे निर्माण गरिएको हो ।
लिगलिग कोट वरिपरि मगर बाहुल्यता रहे पनि दलित र ठकुरीहरूको पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको छ । मगरलगायतका जातजातिको संस्कृति त्यहाँ पुग्ने पाहुनाले अवलोकन गर्न पाउँछन् ।
लिगलिग कोटबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोरम दृश्य हेर्न सकिन्छ । दक्षिणतिर देखिने हरियाली डाँडा तथा फाँटहरू र उत्तरतिर देखिने हिमाली चुचुराहरूले मन लोभ्याउँछ । यहाँबाट मनास्लु, बुद्धलगायतका हिमालको दृश्य राम्रोसँग देखिन्छ ।
पृथ्वी राजमार्गको डुम्रेबाट २६ किलोमिटरको दुरीमा रहेको लिगलिग कोटसम्मै पक्की सडक पुगेको छ । काठमाडौँ होस् या पोखरा, मुलुकका जुनसुकै ठाउँबाट सहजै पुग्ने सकिन्छ ।
लिगलिग कोटको पर्यटन विकासको लागि यस क्षेत्रका युवाहरूले पनि पहल गरिरहेका छन् । लिगलिग भिलेज स्पोर्टस्का अध्यक्ष सञ्जीव रानाका अनुसार घलेहरुले दौडेर राजा छान्ने प्रकृयाको झल्को दिने गरी आउँदो फागुन ७ गते साइकल दौड प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागिएको छ । दसैँको अवसरमा लिगलिग कोट दौड प्रतियोगिता पनि हुँदै आएको छ ।
इतिहासमा चासो राख्नेहरूका लागि लिगलिग कोट महत्त्वपूर्ण त छ नै घुमफिर मन पराउनेहरूको लागि पनि उत्कृष्ट छ । अझ होमस्टेको स्थापनाले यस क्षेत्र पुग्नेहरूको लागि थप सुविधा थपिएको छ । अब ढुक्कले लिगलिग कोटको भ्रमण गर्दा हुने भएको छ ।
होमस्टेका सम्पर्क व्यक्तिहरु:
वेदवहादुर रानामगर– ९८५१२३४८१४
देवी ठकुरी – ९८६२३८५१५५
डिलबहादुर थापामगर – ९७४१७२५२७१
Previous article सडक सञ्जालले मासिँदै पदमार्ग
Next article झोलुङ्गे पुल झिलीमिली